Tariro Mining mu 2018 - Tray News - Blockchain News
With nzeve cryptocurrency kukura, kudiwa midziyo mugodhi kwakawedzera pamwe. Makore mashoma apfuura vose vaikwanisa kuwana zvakakwana kombiyuta simba vaigona kuva mucheri, apo mumakore gore zvinhu zvachinja zvikuru uye zvapfuura nzira migodhi kunge atova sashanda. Hatina yakafanotaura chii migodhi yokurera kwaizova rakakurumbira 2018.
Graphics makadhi kuti mugodhi
Nhasi michina zvinodhura chaizvo inodiwa mugodhi, zvikuru sei, Graphics makadhi. Last June Chinese paIndaneti zvokutengeserana chikuva AliExpress akashuma kuti vanoshandisa ayo akatanga kutarisa zvakawanda vachishingairira dzakananga yemashoko Graphics makadhi dzakanga dzakawanda akakodzera kusika migodhi mapurazi. Chinonyanya akakurumbira yokutevedzera pakati miners Russian vari Nvidia Graphics makadhi-GeForce GTX 1060 uye GTX 1070, uyewo Radeon RX480, kugadzirwa nezvinhu Advanced Micro namano (AMD).
With mhando izvi kuva akakurumbira kwete chete pakati miners Russian, rapfuura gore anozivikanwa migove kuti AMD kunobuda ne 64%, apo kukosha Nvidia Corporation kuchengetedzeka yawana anenge 88% kubva pakutanga 2017. Nyanzvi vanoti kukura iri anonzi yakawedzerwa nhamba miners mune Ethereum zvakarukwa nezvimwe dzakakurumbira cryptocurrencies. Nvidia rakabudiswa date zvinoratidza 6.7% kuti kwemari nokuda chechipiri chikamu 2017 yakagamuchirwa kubva Graphics makadhi okutengesa, izvo zvaishandiswa crypto mugodhi. Ndokusaka mapoka maviri aya uye ASUS kambani Wakatotanga nyaya yakasiyana Graphics makadhi akagadzirirwa cryptocurrency mugodhi. wo, zhizha rapera taiziva kuti AMD akanga achishandisa 7nm 48 Musimboti processor inonzi Starship raizobatanidzwa kusunungurwa 2018.
nyanzvi, zvisinei, vanonyevera kuchera midziyo vagadziri kuti zvinoda kuti zvigadzirwa zvavo ari shure. Maererano Joseph Moore, mumwe muongorori pa American bhengi vakabata kambani Morgan Stanley, kuchera anogona zvemari maturo basa iri 2018.
“Tinotenda kuti zvachose Graphics rokutengesa kuti ethereum kuchera mukati 2017 zvichazova $800 miriyoni kana kuti, uye achaita kutsauka ne 50% muna 2018.”
In Moore mafungiro, wokutanga Chikonzero paanochinja uyu akaronga kuderera zvinonyatsorehwa chinogumbura mubayiro pamusoro ethereum samambure kubva 5 paEti kuti 3 paEti. Wechipiri kuchinja kubva Uchapupu Work (PoW) kuti Uchapupu wehoko (Pos) kana pane simba mugodhi, mukana rakasikwa chidhina uye nekugamuchira akabatanidza mubayiro Proportional kuti rokushandisa muridzi rokutambudzikira munyika. Vijay Rakesh, imwe nyanzvi pamusoro Japanese inivhesitimendi kubhengi Mizuho, ataurwa muitiro uyu zvakare. Ndiye chokwadi kuti yokutanga yezana 2018, Graphics makadhi havazotakurwizve zvinodiwa cryptocurrency mugodhi akadai Eteri mugodhi.
“Tinotenda kuti ethereum anotarira kutamira rakasiyana kubhadhara ongororo wemuTesitamende inotevera mwedzi mitanhatu, kubva Zvinoratidza-of-Work nokushandiswa Graphics makadhi kuti Zvinoratidza-of-wehoko apo Graphics makadhi vari isingachadiwi.”
The chirongwa kunatsiridza tenderano dzakati kuti Ethereum samambure anonzi Casper. Anoreva kuti midziyo kombiyuta kushandiswa harudikanwi zvakare kuti kusika chidhina idzva; pachinzvimbo, vanozvishandisa vachakwanisa kupa mari yavo kuti vaizonzwirwa chando kwechinguvana, uye kudzokera, vachava nomukana kuitawo kwema chisimbiso. saka, Casper achasika hurongwa kuti akunde mugodhi centralization. Kamwe rinotevera forogo Constantinople, izvo zvinogona kuitika pakutanga 2018, anotora nzvimbo, ari Ethereum zvakarukwa update zvichabviswa kusashanda.
Pasinei zvinogona kuchinja nekubvirana dzakati of Ethereum samambure, musoro Nvidia, Juan Zhjensjun, ndiye chokwadi kuti kwemari yaigadzirwa GPU (Graphics kugadzira chikwata) rokutengesa nokuti crypto mugodhi aizoramba, arikuti cryptocurrencies uye blockchain vari “pano kugara.”
“Ichi musika kuti haasi zvichida kuenda chero nguva pfupi, uye chinhu choga kuti tinogona kutarisira ndechokuti kuchava mari kuuya. Richauya yakawanda chose nemarudzi akasiyana. Zvichatora vape- nguva nenguva, uye GPU chaizvoizvo zvikuru kwazvo nokuti.”
ASIC (Application-Dzinenge Integrated Circuit) kuti ariko muchimiro machipisi akasikwa kuti zvinobudirira mugodhi uyewo. ASICs inoshandiswa yakananga mudziyo ubudise zvachose zvishoma mabasa, izvo zvinoita kuuraya mitambo izvi isingadhuri uye dzichimhanya. The Chips vane zvakawanda simba uye mabhodhoro ndoda simba; ivo kakawanda zvikuru zvisingabatsiri kupfuura Graphics makadhi. Uyezve, kuchera mapurazi zvinoda nguva yakawanda yokuva pamusoro peungano uye kupera, apo pamwe ASIC-miners unenge zvose kuisa.
Gore rino wakazvizivisa kuti makambani, akadai Samsung, Intel, TSMC, uye Global Foundries, vakanga nekukudziridza 7nm Chips nokuda ASIC mugodhi. Chips kugadzirwa yainorongwa wokutanga chikamu 2018. Vachava nani simba kunyatsoshanda zvichienzaniswa yapfuura 14nm Chips.
Japanese Internet Zirume GMO anoronga nokuparura mutsva ASIC-Miner raizoparidzwa kwakavakirwa 7nm Chips. Misa Chips kugadzirwa noruzivo uyu akaronga kuti May 2018. gore Next GMO achavarwisa ICO kutengesa inotevera-chizvarwa migodhi mapuranga. Vachaona ngaateme zviratidzo sezvo nzira kutenga inotevera-chizvarwa migodhi mapuranga. kunze, Kambani anoronga kuvaka mugodhi centre muna Northern Europe:
“Tichafara anoshanda ane rinotevera-chizvarwa mugodhi centre utilizing renewable simba uye kucheka-mupendero semiconductor Chips muNorthern Europe. Tichashandisa nokuveza-kumucheto 7nm muitiro michina kuti machipisi zvaizoshandiswa ari kuchera kwacho, uye anorenda kushanda kwayo tsvakurudza uye kubudirira uye kugadzira edu mubatanidzwa nemumwe ane semiconductor kugadzira michina.”
Last September, Russian Miner Coin (RMC) vakaperekedza ICO kutsigira kudhindwa itsva wemarasha Sunrise pamwe Bitfury chips vave umwe mutsva mucheri Multiclet pamwe chete Chip. The ICO akaunganidza $43.2 miriyoni. RMC kunosanganisira 15 vemabhizimisi uye cryptocurrency kurovedzera uye kunobatanidza mapoka mana, kusanganisira MultiClet, SMARTHEAT, Goodwin, uye RadiusGroup. The kambani akatanga Miner Sunrise kugadzirwa uye, kwakazosara chirimo, anoda kuva rinotevera-chizvarwa processor Multiclet, izvo zvichava 35 nguva yakawanda kuti mugodhi.
Zviri pachena kuti simba uye zvinodhura midziyo, iro zvikuru simba unoparadza zvakare, Zvinoda vakabudirira mugodhi. Ndokusaka makambani zvave imwe nzira mhando migodhi, akadana gore kuchera. Makambani pamwe simba mashoko nzvimbo dzinopa midziyo, uye risi zvinhu zvavo kwokupedzisira mutengi. Kana chibvumirano iri akapedzisa uye mabasa vanobhadharwa, Makambani akadai Hashflare, Genesis Mining uye IQMining kupa kuwana remigodhi cryptocurrencies akawanda.
mabasa ava kare trendy. Hapana chikonzero chokudavira kuti ichi zvinenge zvicharamba kutonhora pabasa 2018, sezvo gore mugodhi chiri risingadhuri, vimbika, uye zvakakunakira nzira yokuwana cryptocurrency, kuti hakurevi chinhu midziyo zvinodhura. Pane zvimwe zvainovhiringidzawo zvinobvira. The mutengesi yegore migodhi zvibvumirano anogona ichidzvinyirira; nzvimbo kuti rinopa ichi mhando yebasa zvingava pangozi kugura kurwisa; vanozvishandisa kudzora komisheni kubhadhara kwavanoitwa kuti mugodhi; uyezve, kuzvironga nezvinhu zvinogona kumanikidza date centre kudzorera zvishoma kune vanoshandisa ayo pasi zvinotevera zvibvumirano.
pari zvino, hapana mitemo vari Dare yemigodhi basa kuRussia uye dzimwe nyika kana. The Russian President chirevo, zvisinei, anoti Hurumende Central Bank vachafanira kumisa mitero uye kunyoresa kuitira kuti makambani mugodhi zhizha rinotevera. Muchirongwa ichi zvichaita inonzi kureva zvose makambani uye private miners.
In December, ari Commissioner pasi President of Russian Federation iri kudzivirira kodzero Entrepreneurs, Boris Titov, aronga kuti ataure mutero pamusoro crypto kuchera pa mwero 14%.